Iphrinta ye-UV yedijithali China Manufacturer
Incazelo:Iphrinta ye-UV ephathekayo eJalimane,Iforamu yephrinta ye-UV ebizwa nge-flatbed,IHarga ye-UV ephathekayo yendiza
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-UV > Iphrinta ye-UV ephepheni > Iphrinta ye-UV yedijithali
I-RF-A3UV UV Printer Flatbed inikeza amaklayenti ethu ithuba lokungena elingaphakathi lokungena ngaphakathi. Kunokuba ukhethe ukuthenga i- Phone Case Printer ukuphrinta icala lakho lefoni / igobolondo / iseli, noma ukuhlobisa ikholi yakho yefoni ngamakamelo omdanso wezingane noma izidonga zamadonga wendabuko .3D Photo Wall Murals, Umshini Wokunyathelisa Amakhodi Efoni, umsizi omuhle wecala lefoni Ukuhlobisa .
I-A3 Iphrinta ye-UV uhlobo lwemishini ye-digital type ye-"ye-non-contact" ye-jet uhlobo lwe-digital jetter , iphrinta ye-UV ephathekayo . Ukusebenzisa amadivayisi asekela i-UV inkinobho, ngaphezu kwendwangu ayikwazi ukuphrinta, cishe zonke ezinye izinto (ikhava yefoni, isikhumba, izimpawu, amabhokisi amancane, ukunikezwa kwamandla weselula, i-flash memory disk, ibhodi le-KT, itshe, i-gel silika, izinkuni, i-ceramic, i-crystal, i-acrylic, i-PVC, i-ABS njll.) impahla ingaba umshini wokunyathelisa umbala, uqedile ngokumelana nokumelana, ukumelana nokugqoka, ukumelana nokushayeka. Ukuze uzuze umqondo weqiniso we-seal, akukho ipuleti, u-spray owomile, isithombe esiphelele sombala.
1. Uhlelo lomjikelezo winkino emhlophe.
2. Ukunyathelisa okuzenzekelayo, ngaphandle kwesidingo ukucindezela noma yikuphi ibhodlela, futhi kungaba ukunyathelisa ngokuzenzekelayo.
3. i-inkinobho ebalulekile yepompo esebenzayo, bese ubeka insiza ukupompa inkinobho yokudoba kusuka ekudambiseni.
4. ukuhlanza okuzenzakalelayo ukuphrinta ikhanda, futhi asisabe ukwesaba Festival iholide!
Izici eziwusizo zephrinta lethu le- UV eliphambili laseJalimane RF-A3UV:
2. Iforamu yephrinta ye-UV Flatbed ingafakwa nge-Height Detecting sensor, ukuvikela ikhanda lokuphrinta;
3. I- Harga iphrinta yephrinta ye-Flatbed I-cartridge ineNenzwa yokuThola iNgeli yeNkinobho, uma inkinobho iphelile kuyobe ivusa;
Iphrinta ye-UV ye-Glass Xhumana Nanje
Iphrinta ye-UV ephathekayo yezinkuni Xhumana Nanje
Inani eliphansi le-A3 UV Printer Xhumana Nanje
Iphrinta ye-UV yedijithali Xhumana Nanje
Inhloko yephrinta ye-UV ephathekayo Xhumana Nanje
Iphrinta ye-UV ephrinti e-Dubai Xhumana Nanje
Iphrinta ye-UV ephrintiwe Ink Xhumana Nanje
I-UV Flatbed Printer Los Angeles Xhumana Nanje
Iphrinta ye-UV ephathekayo eJalimane Iforamu yephrinta ye-UV ebizwa nge-flatbed IHarga ye-UV ephathekayo yendiza Iphrinta ye-UV ephathekayo eTaiwan Iphrinta ye-UV ephathekayo e-Malaysia Iphrinta ye-UV ephathekayo e-Australia Iphrinta ye-UV ephathekayo e-Italy Iphrinta ye-UV ephathekayo e-Mumbai